အဘယ်ကြောင့်ထုံလက်, လက်ချောင်း? ထုံလက်ျာလက်ကိုလက်ဝဲလက် - အကြောင်းရင်းများ
အားလုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း, ရှာဘာလို့ထုံလက်တို့ကိုရှာပါ။ စာရင်းများအရပြဿနာ 35 နှစ်အရွယ်အမှတ်အသားအရှိန်မြှသောသူမည်သည်နှင့်အသက်အရွယ်ကိုအောက်တွင်တဝက်အားဖြင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်အခြားသူများအတွက်သာထုံလက်ချောင်းများ, - စုတ်တံ။ လေးနက်သောကိစ္စများတွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလိုအပ်သည်။
လက်၌ထုံ - အကြောင်းရင်းများ
မတရားသောသူသည်ယာယီဖြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်မှုများထပ်တလဲလဲဇာတ်ကောင်ဝတ်ဆင်လိမ့်မည်။ ထုံတို့သည်လက်လျှင်, အကြောင်းပြချက်အများဆုံးမကြာခဏဖြစ်ပါသည်:
ထုံလက်ျာလက်တော် - အကြောင်းရင်းများ
ကျပ်သားအိမ်ခေါင်းရေယာဉ်များဖြစ်ပေါ်ရသော predinsultnoe ခွအေနအေ;
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း syndrome ရောဂါ (ကဂီတသမား, ပရိုဂရမ်, package တွင်ပိုမိုဘုံဖြစ်ပါသည်);
ဆငျးရဲသားစောင်ရေ - မှီခိုများတွင်ဆီးချိုရောဂါ (ကျိုးပဲ့ရေယာဉ်များဂလူးကို့စ) ဖြစ်ပါသည်တဦးတည်းသော, ရောဂါမျိုးစုံအားဖြင့်အစပျိုးသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကျောရိုးရောဂါဗေဒအတွက်လက်ျာလက်ကိုထုံ။ အများစုကတော့ထိုသို့အကြောင်းပြချက်များမှာ အနိမ့်ပြန်နာကျင်မှု , အဆစ်, herniated discs တွေကို။ ထို့အပြင်, ပထမဦးဆုံးရောဂါဗေဒအခွအေနေပြဿနာများ၏တစ်ခုလုံးအကွာအဝေးပါဝင်သည်။ သူတို့ဟာ inextricably ကျောရိုးထဲကအရိုး, အရိုးနုတစ်ရှူးအတွက်ဇီဝဖြစ်စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ဘယ်အချိန်မှာပုံပျက်သောကျောရိုးရှိသတ္တဝါကျောရိုးအာရုံကြောအမြစ်များကြောင့်အဲဒီမှာထုံနှင့်အခြားအဆင်မပြေသော, compressed နေကြသည်။
ကိုယ်ခန္ဓာ၏လက်ျာဘက်၌တည်ရှိ (အထက်နဲ့အောက်) နှစ်ဦးစလုံးခြေလက်အင်္ဂါ, လုပ်ကြံတဲ့အခါမှာပိုပြီးအန္တရာယ်အခြေအနေကဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာဤကိစ္စတွင်အတွက်အဘယ်ကြောင့်ထုံလက်ခြေင်:
လက်ဝဲလက်၏ထုံ - အကြောင်းရင်းများ
အီအကြောင်းပြချက်တစ်ခုအရေအတွက်အားဖြင့်စေသောနိုင်ပါသည်။ အများစုကတော့ဒီရောဂါ။ အဘယ်ကြောင့်ထုံလက်ဝဲလက်မောင်း:
Angina - ထိုလက်ဖျံနှင့်လက်စီးဆင်း မှလွဲ. ၌လည်းညှိုးငယ်ခြင်းရင်ဘတ်နှင့်အခက်အခဲအသက်ရှူအတွက်ရှိပါတယ်, အရာအတွက်ရောဂါဗေဒအခွအေနေ။
Myocardial infarction (လက်ထုံတစ်ခါတစ်ရံကံမကောင်း၏ harbinger တစ်ခုတည်းသော-တစ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်) ။
သွေးကြော - လက်ဝဲလက်၏စိတ်နှလုံးဖို့သွေးလွှတ်ကြောများနှင့်ချို့ယွင်းသောအသွေးကိုပေးဝေရေး၏ကျဉ်း။
ဦးနှောက်လေဖြတ် - ညာဘက် hemisphere ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လက်ဝဲလက်မောင်းနှင့်ခြေထောက်, မိန့်ခွန်းချို့ယွင်းခြင်းနှင့်ဗျာဒိတ်ရူပါရုံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆုံးရှုံးမှုအတွက်ထုံဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ။
Thrombosis - တစ်ပြိုင်နက်ဖြီးမတရားသောသူတို့နှင့်အတူတစ်ရှူးများ၏ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်နာကျင်မှုများကြီးထွားလာပြင်းထန်မှုမှတ်သား။
အဆိုပါသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာနှင့် thoracic ကျောရိုး၏ Osteochondrosis - ကျိုးပဲ့အသားအရေ sensitivity ကို, ထုံလက်။
ဗီတာမင် A နှင့် B ၏ချို့တဲ့ခြင်း - avitaminosis အတွက်တစ်ရှူးများ၏ sensitivity ကိုဆုံးရှုံးအတွက်ရရှိလာတဲ့, အာရုံကြောအမျှင်များ၏အမြှေးပါး၏သမာဓိချိုးဖောက်။
အများစုကတော့ဒီမနှစ်မြို့ဖွယ်အာရုံစီးဆင်းလေးနက်နာမကျန်း၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်။ အခါထုံလက်ချောင်းများ, အရေးပါသောအချက်တစ်ချက်မတရားသောသူတို့၏ဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ မနှစ်မြို့ဖွယ်အာရုံတစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ပြိုင်နက်တည်းဒါအတော်ကြာလက်ချောင်းပေါ်မှာပေါ်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်အချက်များ provocateur များ၏အကြောင်းရင်းအဆုံးအဖြတ်အတွက်အကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွား။ လက်ချောင်းများ၏ထုံမူပြောင်းခြင်းတစ်ဒေသရှိစေခြင်းငှါ:
thumb - မကြာခဏ carpal ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း syndrome ရောဂါနှင့်ဆက်စပ်ထိုကဲ့သို့သောအဆင်မပြေ။ သူကမကြာခဏလက်ကောက်ဝတ်အဆစ်အပေါ်အလွန်အကျွံဝန်အားဖြင့်မှုကိုခံလိုက်ရတယ်။ တခါတရံသူကနှစ်ဦးစလုံးလက်ပေါ်မှာတစ်ပြိုင်တည်းထုံလက်မနိုင်ပါတယ်။ ဤဖြစ်စဉ်ဟာသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကျောရိုးဟာအရိုးတစ်ရွှေ့ပြောင်းခံရရှိကွောငျးကိုဖော်ပြသည်။
လက်ညှိုး - ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအာရုံကြောစနစ်၏ရောဂါဗေဒလေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်တဲ့နိမိတ်လက္ခဏာ။ တစ်ပြိုင်နက်တည်း, လူနာများ၏မနှစ်မြို့ဖွယ်အာရုံလှုပ်ရှားမှု၏နာကျင်မှုများနှင့်တောင့်တင်းစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထုံအညွှန်းကိန်း, လက်ခလယ်နှင့်လက်မလျှင်, ငါတို့သည်တစ်ခု osteochondrosis အကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်, မူးဝြေခင်းနှင့်ဖိအားအပွောငျးအလဲရှိပေမည်။
အလယျပိုငျးလက်ညှိုးကို - ထိုတံတောင်ဆစ်ပူးတွဲ၏ပြင်းထန်သောဖကျြဆီးခွငျးရှိကွောငျးကဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာ။
လက်စွပ်လက်ချောင်း - နာကျင်မှု၏အာရုံခံစားမှုဟာတံတောင်ဆစ်အဆစ်ချုံ့ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်ပါသည်။ အချိန်, carpal ကြွက်သားကျုံ့၏ဖြစ်ပျက်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတုံ့ပြန်မပါဘူးဆိုရင်။
Pinky - လက်ညှိုးထုံခဲ့လျှင်, လျစ်လျူရှုမရနိုငျတဲ့စိုးရိမ်ဖွယ်ရာလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏကချဉ်းကပ်ဖို့ကိုရည်ညွှန်းသည် လေဖြတ် ။
လက်မ၏ mobility ဆုံးရှုံး;
ထုံလက်၌ (လက်ချောင်းထိပ်) ဆိုပါကဒီပြဿနာတွေကို၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်:
Reynaud ရဲ့ syndrome ရောဂါ;
ညဥ့်အခါထုံ, ကိုယ်လက် - အကြောင်းရင်းများ
အိပ်နေစဉ်တွင်ဤသည်မသက်မသာခံစားရခြင်း - ဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါထုံလက်ချောင်းများ အကယ်. အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း, ဒီများအတွက်အကြောင်းပြချက်နေသောခေါင်းစဉ်:
အသုံးပြုသောမသက်မသာခေါင်းအုံး။ ဒါဟာအကောင့်သို့၎င်း၏အရွယ်အစားနှင့်သိပ်သည်းဆယူရန်အရေးကြီးပါသည်။ ခေါင်းအုံးလည်းမြင့်တင်းကျပ်သည်ဆိုပါကသွေးစီးဆင်းမှုနှောင့်အယှက်သောကြောင့်, deflecton နဲခြင်း, သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကျောရိုးထဲမှာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဒါဟာပျော့နှင့်အနိမ့်မှပြောင်းလဲပစ်ရန် သာ. ကောင်း၏။ အဆိုပါစံပြ option ကိုအထူးအရိုးခေါင်းအုံးသို့မဟုတ်ခေါငျးအုံးဖြစ်ဖို့စဉ်းစားသည်။
ကိုယ်ခန္ဓာ၏မလျော်ကန်သောတည်နေရာ။ ဒါဟာဘာကြောင့်ထုံလက်၌အိပ်နေစဉ်နှင့်မည်သို့ဒီအခြေအနေကိုတားဆီးဖို့နားလည်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ရွံရှာဘွယ်သောရောနှောကိုယ်ဟန်အနေအထားမကြာခဏမနှစ်မြို့ဖွယ်ခံစားမှုပြောခြင်းငှါ။
လက်ထုံ - အကြောင်းရင်းများ
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း - ဆေးရွက်ကြီးမီးခိုးကတ္တရာစေးနှင့်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများထဲတွင်ပစ္စုပ္ပန်ဆိုးရွားစွာတန်ဆာများ၏ပြည်နယ်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ သူတို့ကဆတ်, Non-ပလပ်စတစ်ဖြစ်လာသည်။ အလွန်ကြီးစွာသောအခက်အခဲနှင့်အတူသူ့ကိုအဆိုအရကြောင့်ထိုအသွေးကိုဖြတ်သန်း - ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်ထုံတို့သည်လက်ပါပဲ။ အနာဂတျတှငျကပင် gangrene ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။
အရက်ယမကာများအလွန်အကျွံစားသုံးမှု - အရက်, ချို့ယွင်း sensitivity ကိုများနှင့်ထိတွေ့ရာမှခံရသောသူတို့၏အမျိုးအ။ သူတို့ကထုံလှုပ်ရှားမှုတွေ, လက်၏ညှိနှိုင်းခံရပေမည်။
အဝလွန် - အဝလွန်ခြင်း, တစ်ဇီဝဖြစ်စဉ်ရောဂါအစပျိုးလိုက်ခြင်းသွေးစီးဆင်းမှုသက်ရောက်သည်။ ရလဒ်, ထုံလက်ချောင်းများနှင့်ထန်းအဖြစ်။ အထိုင်များလူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြဿနာကိုအထောက်အကူပြု။
ဤအခြေအနေမှနုပျိုနှင့်အထက်အသက်အရွယ်၌ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ လက်ထုံမကြာခဏလက်ချောင်းများအတွင်းပျော့ဉျြးဖဉျြးနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ထိုအခါထန်းအပေါ်မသက်မသာခံစားနှင့်ဖြီးအပေါ်ချောချောမွေ့မွေ့ရွေ့လျားကိုတိုးချဲ့။ မကြာခဏကိုယ်ဝန်ပြဿနာဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရလျက်ရှိသည်။ ဒါဟာကိုယ်ဝန်ကလေးစဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးများအဘယ်ကြောင့်ထုံလက်နာကျင်ကိုက်ခဲလက်ကောက်ဝတ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ အများစုကတော့ကအောက်ပါအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖြစ်ပျက်:
ထုံလက်အား - ဘယျသို့ပွုသလော
ထိုပြဿနာကိုဤကိစ္စတွင်အတွက်ဘာမှလုပ်ဖို့, ကိုယ်ပိုင်အပေါ်သွားသောကြောင့်မလိုအပ်သောသည်ဆိုပါက။ မကြာခဏလက်ထုံလည်းမရှိသည့်အခါနောက်ထပ်အရာ - ကုသမှုဒီမှာမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာနေလျှင်ထိုကဲ့သို့မနှစ်မြို့ဖွယ်အာရုံရှိပါတယ်, ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီကိုရှာတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအကြံပြုသည်။ ထုံအောက်ပါကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ကိုကူညီပါ:
တစ်ပြိုင်တည်းလက်နှင့်အတူထုံခြေထောက်ဖြစ်လာ, ရူပါရုံကိုဆိုးရွားပါကဆုံးရှုံးသွားသောနှင့်တက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လျှင်သင်ချက်ချင်းလူနာတင်ကားခေါ်ပါဖို့လိုပါတယ်။ ဆေးရုံတင်ကုသရန်ပြီးနောက်လူနာထိုကဲ့သို့သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားဖြင့်ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ပြည့်စုံစာမေးပွဲသွားအကြံပြု:
တစ်ဦးဆေးရွေးချယ်တဲ့အခါဆရာဝန်အကောင့်ထဲသို့ဒီမနှစ်မြို့ဖွယ်အာရုံ၏ပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်လူနာများ၏ယေဘုယျအခွအေနေကိုနှိုးဆျောသောအကြောင်းရင်းများကြာပါသည်။ ထိုပြဿနာကိုသဘာဝတွင်အာရုံကြောဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ကိုမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးများကခန့်အပ်:
လည်ပင်းကြွက်သားများစွာဝေဒနာကို၏ပြင်ဆင်မှု - Mydocalm;
ဗီတာမင် B - Milgamma, Neyromultivit ။
မကြာခဏထုံလက်နောက်ထပ်အကြောင်းရင်း, နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ လူနာသောက်ထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အခြေအနေလွယ်ကူချောမွေ့ရန်:
ရေယာဉ်များတိုးချဲ့နည်းလမ်းများ - Corinfar, Kordafen, Nifedipine;
အဆိုပါသွေးကြောဆိုင်ရာသွေးလွှတ်ကြောများ၏ချဲ့ထွင်ဘို့ - Amlodipine Norvasc;
ဆေးဝါးများအောက်စီဂျင်နှင့်အတူထိုအသွေးပြည့်နေပါသည် - Trental, ပန်းအိုး, Trenpental ။
ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် "မူးယစ်ဆေး" အခြားရွေးချယ်စရာဆေးဝါးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ထုံလက်အားဆိုလျှင်, ကုသမှုထိုကဲ့သို့သောနည်းလမ်းဖြင့်ထွက်ယူသွားတတ်၏:
ပူနွေးလာမှု lotion, 60 ml ကိုအမိုးနီးယား, 1 tbsp ယူရာများအတွက်ပြင်ဆင်မှု။ ပရုတ်စိတ်ဝိညာဉ်၏ဆားနှင့်5ပေါက်ဇွန်း။ အဆိုပါအစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ဦးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းနည်းလမ်းများသည်အထိရောနှောနှင့်ကိုက်ညီမှုအတွက်ထိခိုက်အဆစ်သို့ပွတ်နေကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျပူပြင်းတဲ့ compress စေနိုင်သည်။
ရွှေဖရုံသီးနှင့်ဂျုံပိုးကနေဖန်ဆင်းတော်သော anti-inflammatory အေးဂျင့်။ နူးညံ့သောသည်အထိပြုတ်ဇာတိပကတိ၏အတစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့အပိုင်းအစ, ထို့နောက်ဤနေရာတွင် 1 tbsp add တစ်စင်ကြယ်သောထဲသို့နှိပ်စက်။ ဂျုံပိုးတစ်ဇွန်း။ အဆိုပါအစိတ်အပိုင်းများကိုရောနှောခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဖွဲ့စည်းမှု, အလက်ထုံမှလျှောက်ထားထိပ်ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်နဲ့ဖုံးလွှမ်းပြီးစောင်ပတ်ရစ်လျက်ရှိသည်။ 40-50 မိနစ်လိုအပ်ပါတယ်တစ် compress ထားပါ။
လက် 2-3 မိနစ်ခန့်ဖြစ်သင့်သောအသီးအသီးတွင်ကျင်းပဗတ်, Contrast ။ ထိုကဲ့သို့သောလုပျထုံးလုပျနညျးမြား၏အကြံပြုကြိမ်နှုန်း -4ကြိမ်နေ့ဖြစ်၏။
ဤသည်ကိုင်တွယ်အီ minimize လုပ်ဖို့ကူညီပေးသည်။ အနှိပ်ခံ၏အကူအညီနှင့်အတူလက်ထုံနှင့်အတူကုသမှုအောက်ပါထိန်းသိမ်းရေးကပါဝင်ပတ်သက်:
လှုပ်ရှားမှုတွေပွတ်နယ်နှင့် stroking ပြဿနာဒိုမိန်း၏ပီပီ;
ဤရှုပ်ထွေးနာကျင်မှုနှင့်အခြားမသက်မသာခံစားခကျြကိုဖယ်ရှား, သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးပါမည်။ ကျွမ်းဘားအပြင်ရပ်တန်ကာကွယ်ပေးသည်နှင့်ထုံတားဆီး။ အားလုံးလေ့ကျင့်ခန်းစနစ်တကျရွေးချယ်သင့်ပါတယ်မဟုတ်ရင်အစားပြည်နယ်တိုး။ လေးစေခြင်းရှိလွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်။ လက်ထုံများနှင့်ဉျြးဖဉျြးလေ့ကျင့်ခန်းအစုတခုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကူညီပေးသည်:
tiptoes အပေါ်အခန်းပတ်ပတ်လည် Walking ။
လက်သီးသို့ compression လက်, ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းညွန်၌သူတို့ကိုလှည့်။
တုပ်ကွေးရောဂါ 2018 - တစ်ဦးခါနီးကပ်ရောဂါထံမှမျှော်လင့်ဘာလဲ?
အဆိုပါပါးစပ်လိုင်နှင့်သောလျှာသည်ရောင်ခြင်း - ကုသမှု
Doppler echocardiography ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
Cate Blanchett ကတော့: "ဘယ်လိုငါ၏အအမြင်များ share ကြဘူးသူလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းဒဏ်ခံဖြစ်ကလေးများသင်ပေးဖို့?"
ကင်ဆာနှင့်အတူသားသမီးတို့အဘို့ဆံပင်ကြီးထွားဖို့ကောင်လေး2နှစ်
ဖောင်း - အကြောင်းရင်းများနှင့်ကုသရေး
ကိုယ်ဝန်လက - သူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲ?
နွေရာသီ 2014 မော်ဒယ်များဆင်မြန်း